सुन्दरहरैंचामा जसरी काम गरेँ, त्यसैगरी मतदाताले पनि न्याय गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु : शिवप्रसाद ढकाल - Purbeli News
सुन्दरहरैंचामा जसरी काम गरेँ, त्यसैगरी मतदाताले पनि न्याय गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु : शिवप्रसाद ढकाल
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २६, २०७९ समय: २२:१५:४२
यहि ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा शिवप्रसाद ढकाल नेपाली काँग्रेसकाे तर्फबाट सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनेका छन् । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सर्वाधिक मत ल्याएर सुन्दरहरैंचामा मेयरमा निर्वाचित भएका ढकाल अहिले पुनः मेयरको लागि चुनावी अभियानमा लागेका छन् ।
विभिन्न संघ संस्थामा लागेर सामाजिक काम लगायत पाटीकाे राजनीतिमा लामाे समय देखि याेगदान ढकालले पु-याउँदै आएका छन् । विद्यार्थी कार्यकालमा नेविसकाे राजनीतिबाट उदाएका ढकाल नेपाली काँग्रेसका पूर्व माेरङ जिल्ला सहसचिव समेत भएर कुसलता पूर्वक कार्य सम्पादक गरेका व्याक्तित्व हुन् । सुन्दरहरैंचामा लोकप्रिय मानिने ढकाल , यहाँकाे समस्या र पीडाको बारेमा जानकारी राख्छन् । स्थानीय तहकाे निर्वाचन सँग सम्बन्धित रहेर मेयरका उमेदवार ढकालसँग पूर्वेली न्यूजकालागी मणिराम दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सुन्दरहरैंचाको मेयरमा तपाईको उम्मेदवारी किन र के का लागि हो ?
मेरा लागि भन्दा पनि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी हो । मैले विगत ५ वर्षसम्म यस नगरपालिकाको मेयर भएर काम गरेँ । धेरै कार्यक्रमहरु, धेरै योजनाहरु, यस नगरलाई अगाडि बढाउने विषयहरु अझै पनि धेरै अधुरा छन् । भए गरेका कामहरुलाई संस्थागत गर्ने र अधुरा कामहरुलाई पूरा गर्नु छ । गत ५ वर्षका अनुभवहरुलाई जनभावना बुझेर यो नगरको समृद्धि र विकासमा पुनः प्रयोग गर्ने भनेर यो उमेदवारी आएको हो ।
यहाँकाे कार्यकालमा जनताले अनुभूति गर्न पाएका के के कामहरु भए?
सुन्दरहरैंचा विकासको बगैँचा, कृषि पर्यटन र पूर्वाधार, सुन्दरहरैंचाको समृद्धिको आधार भन्ने हामीले नारा बनाएर सोही अनुसार काम गरेका थियाै । सोही नाराका आधारमा हामीले तीनओटा मुख्य विषयमाथि फोकस गरेर काम गरेका छौँ । यो नगरपालिकामा हामीले यो ५ वर्षमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै ठुलो फड्को मारेका छाैं यो अवधिमा १७७ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको छ । यो बिचमा धेरै कामहरु भएका छन् । ७८ ओटा पुल र ४ ओटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । घाट बनेको छ, त्यसैगरी बाघझोडा र हसिना सिमसार बनेका छन् । शेषनारायण लगायतका मन्दिरहरु बनेका छन् । मस्जिद बनेको छ, नेवा खलःको मन्दिर बनेको छ । साकेला थान, रङ्गशाला, ज्येष्ठ नागरिकका कार्यक्रम देखि महिला र बालकालिकाका धेरैओटा कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका छन् । त्यही जगमा टेकेर म अहिले अगाडि आएको छु ।
सुन्दरहरैंचामा पुनः मेयर बन्ने आकांक्षा चाहिँ यहाँले किन राख्नु भएको हो ?
पहिलो कुरा यो मैले भन्दा पनि मेरो पार्टीले अघि बढाएको हो । अर्को कुरा मैले विगत ५ वर्षमा गरेका अधुरा कामहरुलाई पूर्णता दिन, केही प्रक्रियामा रहेका, केही प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका योजनाहरु रहेका हुनाले यी सबै कुराको सम्मिश्रण गरेर बाँकी ५ वर्ष पनि यही नगरको समृद्धिमा लगाउने उद्देश्यले पार्टीले मलाई उठाएको हो ।
यहाँलाई नै नगर प्रमुखमा जिताउनु पर्ने त्यस्तो खास कारण चाहि के होला ?
नगरमा मैले गरेका काम, मेरो इमान्दारिता, मेरो लगनशीलता, यो ५ वर्षमा जसरी मैले काम गरेँ, जनताले प्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गर्ने गरी काम गयौँ । जस्तो २०७४ को बाढी, त्यसवर्षको बाढीले तहसनहस बनाएको सुन्दरहरैंचालाई सहज ढंगले अगाडि बढायाै । गछिया खोलाको पुललाई झन्डै भत्काइसकेको अवस्था थियो, अत्यन्त ठुलो आँटले मात्र त्यसलाई जोगाउन हामी सफल भयाै । अहिले पनि कोरोनाको तीनवटै भेरियन्टमा जसरी हामीले काम गयाै । यस नगरका कुनै पनि नागरिकले बेड र अस्पतालको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेन । उपचारको कमीको कारणले कसैले ज्यान गुमाउनु परेन, स्वास्थ्यकर्मीहरु काेविडकाे समयमा घरघरमा पठायौँ । घर घरमा उपचारको व्यवस्था मिलायौँ, अक्सिजनको कमी कसैलाई हुन दिएनौँ, एम्बुलेन्सको कमी हुन दिएनौँ हामीले । यति गर्दा पनि नगरवासीको ज्यान गइहालेको खण्डमा पनि हामीले शववाहनको व्यवस्था मिलायौँ । दमकलको व्यवस्था मिलायौँ । पहिलो र नयाँ नगरपालिका भए पनि हामीले विकासका धेरै आधारहरु खडा गरेका छौँ । त्यसले पनि यहाँ हाम्रो उम्मेदवारी दाबी गरिएको छ ।
चुनावकाे मुखमा प्रचार प्रसार , घरदैलो तथा काेण सभाकाे कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ ?
अत्यन्त उत्साहका साथ घर दैलो कार्यक्रम भइरहेको छ । साथीहरु, हाम्रो टिम परिचालित भइरहेको छ । म पनि सकेसम्म सहभागी भइरहेको छु । तर सबै ठाउँमा सहभागी हुन सकेको छुइन । किनभने ठुलो भूगोल छ । यो छोटो समयमा यो सबै भूगोलमा पुग्न पनि सम्भव छैन । म यही मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई तपाईहरुको विकासमा, तपाईहरुको सारो गारोमा, तपाईहरुको अप्ठ्यारोमा तपाईहरुको सँगसँगै म छु । म आँगनसम्म आउन नपाए पनि प्रतिनिधि मार्फत घरमा पुगेर मत माग्ने काम भइरहेको छ । फेरि अर्को ५ वर्ष पनि तपाईहरुको सँगसँगै काम गर्न पाउने गरी भोलिका दिनमा अझ राम्रो काम गर्ने अवसर दिनु हुनेछ र विश्वास गर्नु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
मतदाता र कार्यकर्ताको साथ सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ ?
मतदाता र कार्यकर्ताको सहयोग राम्रो छ। हामी चुनावमा उल्लासमय तरिकाले नै अगाडि बढिरहेका छौैँ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र चाहिँ केही समस्या देख्नु भएको छैन ?
जीवन्त पार्टीमा सामान्य समस्याहरु हुन्छन् । ती सबै समस्याहरुको समाधान भइसकेका छन् । अहिले सुन्दरहरैंचा काँग्रेसमय भएर एक साथ अघि बढिरहेको छ ।
चुनावलाई गठबन्धनले असर गर्छ भन्ने लागेको छैन ?
गठबन्धनले त फाइदा गर्छ नि । एकदलको मात्रै कुरा हुन्थ्यो, दुई दल भएपछि त झन बलियो हुने भयो । त्यसकारण हामी संयुक्त रुपमै अघि बढेका छाै ।
यस नगरका समस्याहरु के के छन् र ती समस्याहरुको समाधान कसरी गर्न सकिएला ?
यो पहिलो पटक स्थापना भएको नगरपालिका हो, समस्याहरु धेरै छन् । यी समस्याहरुको समाधान पनि हामीले सामूहिक रुपमा गरिआएका छाैं । बुँदागत रुपमा भन्दा यो निकै लामो हुन्छ । सबै समस्याहरुको पहिचान भइसकेको छ । समाधानको उपाय हामी सोच्छाैं ।
यहाँको घोषणा पत्र र चुनावी प्रतिबद्धता के रहेको छ, समग्रमा जानकारी गराइदिनु हाेस न ?
मेरो पहिलो घोषणापत्र ६४ बुँदाको रहेको थियो । हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेको मध्ये ८० प्रतिशत कामहरु पूरा गरेका छाैं । विगतको ५ वर्ष कार्यकालको उपलब्धि र कमीहरु पनि मैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छु । यस पालिको घोषणापत्र ८८ बुँदाको छ । जसमा शिक्षा, खेलकुद ,बालबालिका, स्वास्थ्य, कृषि उद्यम ,रोजगारी, पर्यटन प्रबर्द्धन, वातावारण, सरसफाइ ,विपद् व्यवस्थापन, सुशासन , सेवा प्रवाह , प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, कला साहित्य पत्रकारिता साथै मानव संशाधन विकास र सशक्तिकरण लगायत पार्टीको घोषणापत्रमा बुँदागत रुपले समेटेका छाै । जति काम गर्न सकिन्छ, त्यति मात्रै हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छाैं । सबैलाई एकपल्ट त्यो हाम्रो घोषणापत्र गम्भीर भएर अध्ययन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
सुन्दरहरैँचालाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन तपाईको योजना के रहेको छ ?
पर्यटकीय स्थलको कुरा त अघि पनि उल्लेख भइसकेको छ । हसिना सिमसारमा अहिले १० करोड भन्दा बढी लगानी गरेर काम भइरहेको छ । यो वर्ष हामीले बाघझोडा सिमसारमा १० करोड भन्दा बढी खर्च गरेर त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्दैछाैं । शेषनारायण र वृन्दावन गौशाला कालीखोला, भुल्के, देवी लगायतका ठाउँहरुलाई हामीले पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिरहेका छाैं । धेरै हदसम्म विकास पनि भएको छ । यस सन्दर्भमा चाहिँ यो नगरपालिका राम्रो, हाम्रो र सबैले हेर्नलायक स्थल चाहिँ हामीले यो ५ वर्षभित्रमा बनाउँछौँ ।
बाटोघाटोको अवस्था बारेमा के भन्नुहुन्छ ? यसकाे बारे तपाईका आगामी योजना कस्ताे रहेका छन् ?
कुनै पनि बाटाहरु कालोपत्रे बिहीन छैनन् । भित्री बाटाहरु यस वर्ष हामीले बनाउनु पर्छ ।
हामी कुराकानीको अन्तिम प्रसंगमा पुगेका छाैं । समग्रमा भन्नुस कि यहाँको विजयको आधार के हो र यहाँलाई भोट किन दिने ?
विजयको आधार त मतदाताले मत हाल्ने हो । होइन ? मलाई विश्वास छ, मैले पाँच वर्षसम्म इमान्दारिपूर्वक सेवा गरेको देख्नुभाको छ यहाँहरुले । सबै नगरबासीले देख्नु भएको छ त्यसकारण, मैले कसैलाई विभेद गरेको छैन, कसैसँग पनि आग्रह पूर्वाग्रहमा परेको छैन । जसरी काम गरेँ, त्यसैगरी मतदाताले पनि न्याय गर्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । उहाँहरुको न्याय नै मेरो विजयको आधार हो। निर्वाचनमा सबै उमेदवारले सफलै हुन्छु भन्नुहुन्छ तर मसँग चाहिँ आधारहरु छन् । वस्तुगत आधारहरु भएका कारणले र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र सहकाय भएका कारणले मलाई बिजयी हुनलाई त्यति समस्या छैन । मतदाताले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ । धन्यवाद